Wararka - Hormuudka iibka Hengyi ayaa isu yimid si ay uga hadlaan fursadaha cusub
Shirkii Hengyi ee iibinta gudaha ee shirka oo koobnaa bartamihii sannadka ayaa si guul leh loo qabtay
Laga bilaabo Luulyo 31 illaa Ogosto 1, kulan kooban oo laba maalmood ah oo ku saabsan sannadka iibka gudaha ee Hengyi Electric Group 2020 ayaa lagu qabtay xarunta kooxda. Kulanka waxaa hogaaminayay agaasimaha iibka Zhao Baida. Shaqaalaha waaxda iibka ka dib ayaa ka qeyb galay kulanka.
Kulanka ayaa lagu dhagaystay horumarka shaqada, soo koobid waxqabad, falanqayn istiraatiiji ah iyo dhinacyo kale oo ka tirsan waaxda iibka iyo gobollada waaweyn. Agaasime Zhao Baida wuxuu sameeyay isbadal iyo geynta siyaasadaha iibka, qeybinta gobolka, hababka abaalmarinta iyo ciqaabta, iyo kor u qaadida suuqa.
Kulanka, Madaxweyne Lin Xihong wuxuu soo koobay waxqabadkii kooxda qeybtii hore ee sanadka, wuxuuna sameeyay falanqeyn muhiim ah oo ku saabsan isbeddellada warshadaha, hordhaca kartida, isbeddelada fikradaha, iyo dardargelinta casriyeynta caqliga leh. Wuxuu ka codsaday dhammaan shaqaalaha wax iibiya inay si buuxda u ciyaaraan faa'iidooyinka tartan ee badeecadaha iyo sumcadaha shirkadda, ay qaadaan tallaabada ay ku maareynayaan macluumaadka suuqa, inay sameeyaan dadaallo joogto ah, inay dhibaatooyinka u beddelaan fursado, oo ay sameeyaan dadaal kasta si ay ula dagaallamaan dagaalka adag qeybta labaad ee sanadka.
Dadka wax iibiya ayaa isu yimid si ay u wadaagaan waayo -aragnimada iyo waayo -aragnimada, ma aha oo kaliya inay bartaan waayo -aragnimada guusha leh ee wada -hawlgalayaasha aadka u wanaagsan, laakiin sidoo kale waxay sare u qaadeen is -fahamka labada dhinac. Isgaarsiin qoto dheer oo leh farsamo, iibin kadib, adeegga gudaha, suuqgeynta iyo waaxyaha kale ee kulanka. Si adag u shaqee si aad u xalliso dhibcaha xanuunka macmiilka iyo dhibaatooyinka. Qof kastaa wuxuu isku raacay in xilliga cusub iyo xaaladda cusub, caddeynta jihada horumarinta istaraatiijiga ah ee shirkadda, diiradda la saarayo baahiyaha iyo qiyamka macmiilka, iyo in si sax ah loo hagaajiyo heerarka badeecadaha iyo adeegyadu waa diiradda xigta ee dhammaan suuqgeeyayaasha.
Si looga jawaabo isbeddelada suuqa oo loo muujiyo jagada hoggaamiyaha warshadaha, Hengyi wuxuu horumariyey oo xaqiiqsaday soosaarka ballaaran ee alaabooyin iyo xalal kala duwan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin capacitors smart, modules magdhow capacitor smart smart, capacitors anti-harmonic smart, iyo HYAPF filtarrada firfircoon HYSVG koronto-dhaliye static var, HYGF awood caqli leh oo tayo sare leh maareynta maareynta dhammaystiran, JKGHYBA580 caqli-gal ah oo lagu daray cabbiraadda awoodda falcelin-koronto-yar iyo aaladda xakamaynta, iwm.
Waqtiga dhejinta: Aug-02-2020